အလှူခံဖလားထက်နိမ့်သောခွက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » အလှူခံဖလားထက်နိမ့်သောခွက်
- Yoe Shin
Posted by Yoe Shin on Aug 17, 2010 in News |4comments
နေ့စဉ်မြင်တွေ့နေရတဲ့ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ စိတ်ဘ၀င်မကျစရာတွေစိတ်ပျက်စရာတွေ စိတ်မချမ်းသာစရာတွေ အနည်းနဲ့အများရှိနေပါတယ်၊ ဒီအထဲကနေ့တိုင်းတွေ့မြင်နေရလွန်းလို့ မြင်ရတာအကျည်းတန်လွန်းလို့မပြောဘဲမနေနှိုင်၊သိပ်ပြောချင်နေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုရှိနေပါတယ်၊ အကြောင်းအရာအသစ်အဆန်းတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူး၊ရန်ကုန်မှာနေ၊နေ့စဉ်လုပ်ငန်းခွင်အသွားအပြန်ဘတ်(စ်)လိုင်းတွေဘဲ အားကိုးနေရတဲ့ ၀န်ထမ်း၊အလုပ်သမားတွေတိုင်းတွေ့ကြုံမြင်တွေ့နေမှာပါ၊အလှူခံဖလားလို့လူရွှင်တော်တွေပြောလေ့ရှိတဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေကိုစည်းကမ်းတကျဖြစ်အောင် ထိန်းသိမ်းဖို့တာဝန်ယူထားတဲ့ဝန်ထမ်းများပါဘဲ၊အလှူခံဖလားအဆင့်လောက်ဆိုကြားလို့ကောင်းပါသေးတယ်၊ ခုမြင်နေရတာကဒီထက်ပိုနိမ့်လွန်းနေလို့ပြောချင်လာမိတာပါ၊အလှူခံဖလားဆိုရင် လေးလေးစားစားအပြုအမူနဲ့လက်ထိလက်ရောက်ထည့်ဝင်လှူဒါန်းကျရတာ ထုံးစံပါ၊ခုမြင်နေရတာက မီးပွိုင့်အချက်ပြရုံးလေးနားရောက်ရင် ၁၀၀/-တန်၊၅၀/-လေးတွေကျစ်ကျစ်ပါအောင်၊သေးသေးလေးဖြစ်အောင်ခေါက်၊ အချက်ပြရုံနားအဖြတ်မှာ လက်ခလယ်လေးနဲ့တောက်၊ရုံထဲအရောက်ပို့နေကြတာတွေ့နေရပါတယ်၊ တစ်ခါတစ်လေလည်း ကိုယ်ကမီးပွိုင့်နားကို လမ်းလျှောက်ရင်း အဖြတ်၊သူတို့တောက်ထည့်လိုက်တဲ့ငွေစလေးကချိန်သားမကိုက်ဘဲကိုယ့်ခြေထောက်ကြားထဲကျလာ၊သူတို့လည်းကောက်ရအခက်၊ကိုယ်ကလည်းကောက်ပေးရအခက်၊ ဘယ်လောက်ခက်လိုက်သလဲ၊မျက်နှာပူစရာကောင်းလိုက်တာ၊ ဂုဏ်သိက်ခါတွေကိုမဖြစ်စလောက်ငွေတွေနဲ့လဲနေကြတာလေ၊ နေ့စဉ်လစဉ်ဖြတ်သန်းသမျှကားစီးရေနဲ့ဆိုရင်တော့ဖြစ်လောက်သလောက်ဖြစ်လို့နေမှာပေါ့။
တစ်ချို့ကျတော့ ဒီနည်းမသုံးပြန်ဘူး၊ဒီထက်နည်းနည်းသာတယ်ဒါကတော့နေ့စားအလှူခံစေလွှတ်ကောက်ခံတဲ့နည်းဘဲ၊မီးပွိုင့်မှာမီးနီပြလို့ရပ်တန့်နေပြီဆိုရင်တော့ အလှူခံပုတ်ဂိုရောက်ရှိလာပါတယ်၊ဒီအခါသူ့လက်ထဲကို ငွေတစ်ရာတန်တစ်ရွက်သာထည့်ပေးလိုက်ပါ၊သင်တာဝန်ကျေပါပြီ၊သူကတော့ယူနီဖောင်းဝတ်မဟုတ်ပါဘူး၊ နေ့စားအကောက်သမားပါ၊ဒီတာဝန်ကိုတစ်ခါတစ်ရံ မီးပွိုင့်ကြားမှာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေတဲ့ပန်းရောင်းတဲ့လူ၊ကွမ်းယာ၊စီးကရက်ရောင်းသူတွေကပူးတွဲ တာဝန်ထမ်းဆောင်ပါတယ်၊ဥမမယ်စာမမြောက်ကလေးအကောက်ကတော့ခပ်များများပါ၊
တစ်ချို့နေရာကျပြန်တော့လည်း၊ လက်ဝါးချင်းရိုက်တဲ့နည်းကိုသုံးပြန်ရော၊ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအရပေါ့၊သူကတော့ ကျောထောက်နောက်ခံမရှိ ဟိုနားမိုးတိုးမတ် တတ်၊ဒီနားမိုးတိုးမတ်တတ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတဲ့ပုတ်ဂိုမျိုးပေါ့၊သူ့ကိုတွေ့ပြီဆိုရင်တော့၊ကိုယ့်ကားကိုအရှိန်သတ်၊အနားရောက်ရင်စိတ်ပါပါ၊မပါပါပြုံးပြ ယာဉ်နောက်လိုက်ကလက်ထဲမှာအသင့်ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ ၁၀၀တန်၊၅၀တန်ငွေစလေးတွေနဲ့ လက်ဝါးချင်းရိုက်လိုက်ရုံပါဘဲ၊ဒါဆိုရင်ပတ်(စ်)ပေါ့၊ သင်မောင်းလာတဲ့ကားကလုံးဝအပြစ်ရှာလို့မရအောင်ကင်းစင်နေတယ်ဆိုပါစို့၊သင့် ကိုယ်သင်ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ ဒီတာဝန်တွေကိုမကျေပွန်ဘဲ ကျော်ဖြတ်သွားဖို့ိ့ တော့စိတ်မကူး ပါနဲ့၊သင် နားဆူသွားပါလိမ့်မည်။
ဒါတွေကို မြင်နေကျမြင်ကွင်းနေလို့ မဆန်းတော့ပေမည့်မြင်တွေ့ရတိုင်း စိတ်မချမ်းသာမိလို့ ရင်ဖွင့်လိုက်မိတာပါ၊
တရားခံဘယ်သူလဲ၊ ဒီရောဂါကိုဘယ်လိုအမြစ်ပါမကျန်အောင်ကုစားကြရင်ကောင်းမလဲ၊ စာရှုသူ
About Yoe Shin
Yoe Shin has written 1 post in this Website..
I amamale andastaff of company.
View all posts by Yoe Shin →
သတိပေးရာရောက်တော့ သူတို့လည်း ဆင်ခြင်နိုင်တာပေါ့……………….
ကျနော်လည်း အဲဒီအကြောင်းကို ပြောချင်နေတာ ကြာပြီ။ ကျနော်က ဓါတ်ပုံနဲ့ တကွ ဖော်ပြလိုက်ချင်တာပါ။ အခုလို ရေးလိုက်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ လမ်းထိပ်နားက ယာဉ်ထိန်းရုံမှာဆို ရပ်ကွက်ထဲက ဆေးသမားတွေ ယာဉ်ထိန်းရဲတွေနဲ့အတူ ဆေးရှုနေတာတောင် တွေ့ရဖူးတယ်။
Thank you Yoe Shin. These are daily acceptable routines in Burma according to the military regimes` standard. Look at their chief. Than Shwe is mass murderer, criminal of crime against Humanity, and mentally-deluded pervert who fail to see the consequence of his crimes. He thinks he could get away with crimes by offerings to Sangas, offering to religion, building the Pagodas and paying pilgrim to Buddha Gaya. He attains the lowest layer of ghost level near his eternal life of Awisi, so that he is unable to justify his apparent crimes. He got no friends at all to help him out of this ghost life because he is surrounded by ghosts. I am not surprise to see Than Shwe being able to commit further crimes without remorse. If the ruler of Burma is suchadevil minded pervert dire state, I am not surprise to see little crimes committed by street polices for their survival. I am sure almost all public servants have to do their bit of bribery and corruption for their survival. The traffic polices and civil servants do not commit crime against humanity. To see gun-totting soldiers using their lethal weapon on people in border areas, forced labour implementation and using villagers as human mine-clearance vehicles areafew points to compare with apparent innocent routines of civilian polices on street. We need to see the root problems in our beloved country. We need to harm Than Shwe`s election by Boycotting it. Than Shwe will fail when very few voters turn up on election day for him to claim victory with ready-made 99% win result. If he fail, his ghosts will catch him alive for his grand failure. There are thousands of disgruntled soldiers in army who will come out to rescue the people in the street. Boycott the Election.